Xavi Oo Ka Hadlay Mustaqbalka Frenkie De Jong Iyadoo Manchester United La Isla Dhexmarayo
HomeSuuqa kala iibsigaXavi oo Ka Hadlay Mustaqbalka Frenkie de Jong iyadoo Manchester United la isla dhexmarayo
Tababaraha Barcelona Xavi ayaa sheegay in Frenkie de Jong uu noqon karo ‘halyeey’ Camp Nou haddii uu kooxda sii joogo waqti dheer.
Mustaqbalka xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa haatan ah mowduuca si weyn loo hadal hayo, iyadoo Manchester United la sheegay inay ka go’an tahay saxiixiisa inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Tababaraha soo socda ee Red Devils Erik ten Hag ayaa khadka dhexe ka maamulay Ajax, waxaana loo maleynayaa inuu quus ka taagan yahay inuu mar kale kula shaqeeyo Old Trafford, iyadoo kooxda reer England ay isku diyaarineyso inay dib u habeyn ku sameyso khadkeeda dhexe.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Barcelona ay diyaar u tahay inay iska iibiso xiddiga reer Holland hadii ay ka helaan dalab dhan 51 milyan ginni.
Si kastaba ha ahaatee, la’aanta Man United ee kubbada cagta Champions League xilli ciyaareedka soo socda ayaa ugu dambeyntii ku keeni karta fursad ay 25 jirkaan ku keeni karaan Premier League.
De Jong ayaa xilli ciyaareedkan muhiim u ah kooxda Barcelona isaga oo 45 kulan u saftay tartamada oo dhan isaga oo ka qayb qaatay 4 gool iyo shan caawiye.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo jeediyay in kooxda reer Catalan ay u furan tahay inay iska iibiso xiddigan sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha, iyadoo kaliya lix ciyaaryahan ay kooxda u arkaan inay yihiin lama taabtaan .
Marka laga soo tago Ansu Fati , Pedri , Gavi , Ferran Torres , Ronald Araujo iyo Eric Garcia , dhamaan ciyaartoyda kale ee kooxda koowaad ee kooxda ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay ku iibsadaan qiimo sax ah.
Xavi ayaa wax laga weydiiyay mustaqbalka De Jong sabtidii, xilli uu hadlayay ka hor kulanka Axada ee La Liga ay la ciyaarayaan Getafe.
Xiddiga reer Spain ayaa diiday in uu meesha ka saaro in uu xagaaga ka tagayo xiddiga reer Holland laakiin waxa uu sheegay in ay ka go’antahay in uu sii haysto xiddig awood u leh in uu ka mid noqdo halyeeyada kooxda.
“Waxa uu ii yahay ciyaaryahan muhiim ah, wuxuuna ku soo bilowday ciyaar kasta marka laga reebo dhowr rogaal celis ah. Laakiin waxay ku xiran tahay xaalada dhaqaale, aniga ahaan, Frenkie wuxuu noqon karaa mid ka mid ah halyeeyada kooxda,” Xavi ayaa u sheegay suxufiyiinta.
De Jong, oo ganaax ku seegaya kulanka axada ee Getafe, ayaa Barcelona uga soo dhaqaaqay Ajax bishii Luulyo 2019 isagoo gadaal ka dhaliyay shan gool, waxaana loo diiwaangeliyay 13 caawin 89 kulan oo uu u saftay kooxda Amsterdam.
Tan iyo markii uu yimid Camp Nou, waxa uu dhaliyay 13 gool, waxaana loo diiwangeliyay 17 caawin 138 kulan oo uu u saftay kooxda Catalan, waxaana qandaraaskiisa uga harsan wax ka badan afar sano.
Waqtiga ka haray heshiiska ciyaaryahanka reer Holland ayaa ka dhigaya meel adag marka ay timaado wadahadal kasta oo macquul ah, laakiin waxaa la sheegay in dalabyada ka badan € 50m (£ 43m) ay keeni karto kooxda La Liga miiska wada xaajoodka. .
Barcelona ayaa wali haysata deymo badan, laakiin Xavi ayaa lagu eedeeyay in uu doonayo in kooxdiisu ay xagaagan keento siddeed ciyaartoy oo cusub Camp Nou isaga oo rajo ka qaba in ay u tartamaan koobabka waaweyn xilli ciyaareedka dambe.
“Anigu waxaan ahay qof rajo wanaagsan leh, waxaan qabaa in kooxdu ay noqoto mid tartan ah, ma aannan suurtagelin inaan si heer sare ah u tartamo xilli ciyaareedkan, laakiin xilli ciyaareedka soo socda waa inaan u dagaallanaa koobab,” ayuu Xavi ku daray Sabtidii.
Barcelona ayaa doonaysa in ay xaqiijisato kaalinta 2-aad ee kala saraynta horyaalka La Liga todobaadkan ka hor kulankooda ugu dambeeya ee horyaalka xilli ciyaareedkan oo ay gurigooda kula ciyaari doonaan kooxda Villarreal 22-ka May.